Imbali yomdaniso wamaGrike | Ukuhamba kwe-Absolut
Imbali yomdaniso wamaGrike
Ukuqala kwe umdaniso eGrisi Akucaci, kuyaziwa ukuba umdaniso udlale indima ebalulekileyo kubomi bamaGrike kuyo yonke imbali.
Kwiindawo zakudala IsiGrike las imidaniso Babethandwa kakhulu, eneneni kwimibhalo yakhe uPlato wavakalisa inkolelo yakhe kumgangatho wokungqungqa ngokuchaza ukuba umntu ongadanisiyo wayelungile kwaye engafundanga.
Kwimibhiyozo yokuhlonipha UDemeter, iEra kunye noArtemis nakwiminyhadala yasePanathene apho u-Athena wayezukiswa khona, iintombi zazidanisa ngengubo ende ukuya ezinyaweni.
Esinye sezixeko ezidumileyo zaseGrisi zakudala eza kubadanisi baseDelphi ababevela kwimimandla ekude kakhulu, kuba mandulo Umdaniso yayiyinxalenye ebalulekileyo yenkolo.
Njengemeko yemvelaphi yasentsomini yeminye imidaniso libali likaTheo owabulala iminotaur kwi-labyrinth yaseKnossos.
Xa ebuyela eAthene, uLeusus wema eDelos ukuba enze umbingelelo koothixo kuba bamsindisile, ngelixa idini laqhubeka waqamba uhlobo lomdaniso olwaxelisa intshukumo yeenyoka ezazimele umendo ombhoxo awayefanele ukuhamba kuwo. I-labyrinth kumlo wakhe kunye ne-minotaur.
Yaziwa ngokuba umdaniso welebyrinth okanye iGeranos njengoko yayibizwa njalo kwimibhalo yakudala, namhlanje kuyadaniswa kwimimandla emininzi yaseGrisi
Kule mihla, imidaniso yesintu ihanjiswa ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana njengoko abantu bonwabela kuyo nangaluphi na uhlobo lombhiyozo.
Eminye yale mingqungqo ithathwa njengePanhellenic, ethetha ukuba ivela kulo lonke elaseGrisi njengeKalamatianós kunye neTsámikos.
Nangona kunjalo, ingingqi nganye igcinile imidaniso yayo apho ingeyiyo yonke edume kakhulu kangangokuba baba semngciphekweni wokulityalwa kukwanda kwemidaniso evela kwezinye iingingqi ezinkulu.
Ngabantu abadala abakhathalayo ukuba le midaniso ayilahleki ngokufundisa ulutsha.
Ngaphandle kwento yokuba imingqungqo izalelwe kwimimandla eyahlukeneyo, inokufana okuninzi phakathi kwabo njengendlela yokubambana ngezandla, ukuma ngokuchanekileyo, ukuyilwa kwemidaniso kunye nezinto abazisebenzisayo.
Isangqa asinakubakho kuyo nayiphi na evaliweyo okanye evulekileyo ngokwenza ikhonkco okanye ukunxibelelana neengalo ezibambe izandla okanye amagxa.
Lowo ukhokela umgca ngumenzi wezitepsi ngokungathi wayedanisa, uyihombisa kuphela ngendlela yakhe kwaye uyinika ukubamba okumangalisayo kangangokuba kuyiguqula ibe ngumdaniso onemibala.
Wonke umntu ophakama ayokudanisa ngalo mzuzu NGUKUMKANI ngaphandle kodidi lwabo lwentlalo okanye imeko yezoqoqosho.
isikoI zi ganekoAmaqelangokubanzi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imbali yomdaniso wamaGrike
umbala obomvu sitsho
Eli phepha liyonwabisa kakhulu kuzo zonke iinkcubeko, zikhona kweli candelo, enkosi ngazo zonke izinto, kwaye zisinika baii
Phendula i-meriel rojas
Ndiyazi kuphela umculo kaSorva umGrike. kwaye ndiyayithanda, ndicinga ukuba eminye imingqungqo nezinye izingqisho nayo iyakuba mihle
Izinto zekhompyuter zilungile kakhulu, malunga nemidaniso yamaGrikhi, ndingutitshala wemidaniso yase-Argentina, edluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana kwaye ndiyabulela kuThixo ukuba kukho izifundiswa ezininzi ezibafundisa ukudanisa, kungenjalo baya kulahleka enzonzobileni yexesha
Umlambo omkhulu iCauca
Umlingo wemilomo yomlotha